महरा चीन पुगेर आएपछी प्रधानमन्त्री देउवा किन जान लागे अमेरिका ? « हाम्रो ईकोनोमी
महरा चीन पुगेर आएपछी प्रधानमन्त्री देउवा किन जान लागे अमेरिका ?
छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमण सकेर फर्किएको एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने भएका छन। उनको भ्रमण तालिका पनि तय भएको छ । आगामी असोज पहिलो साता अमेरिका जाने गरि उनको भ्रमण तालिका तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका जान लागेका हुन् । यो उनको दोस्रो विदेश भ्रमण हुनेछ । देउवाले सुरुमा तेस्रो चरणको निर्वाचनका बेला अमेरिका भ्रमणमा नजाने बताएपनि महासभामा उनको सम्बोधनको पालो असोज ५ वा ६ मा आउने भएपछि उनी त्यसतर्फ जाने योजना बनेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाल यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवार भएकाले जानुपर्ने भन्दै आएको थियो । दुई बर्षदेखि महासभामा नेपालको प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहभागिता नभएकाले पनि जानुपर्ने भन्ने सुझाव आएपछि देउवाले भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि रहनेछन् । महरा न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि चीन पुगेर फर्कने छन् । महरा आगामी साता चीन जाने तयारीमा छन् । र देउवाको अमेरिका भ्रमणमा जम्बो टोली हुने समेत बुझिएको छ।